Izingxenye Ezine Ezikhethwe Ezwini LikaNkulunkulu Ngesithi “Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba” | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
19. Kusho ukuthini ukupheleliswa? Kusho ukuthini ukunqotshwa? Yini umuntu okufanele ayenze ukuze anqotshwe? Futhi yini okufanele ayenze ukuze apheleliswe? Ukunqotshwa nokupheleliswa kuwumgomo womuntu osebenzayo ukuze abuyele esimweni sakhe sasekuqaleni, akhululeke esimweni sikaSathane esikhohlakele nasekuyengweni nguSathane. Lokhu kunqoba kusheshe kufike kumuntu osebenzayo, okusho ukuthi kuyisigaba sokuqala somsebenzi. Ukuphelelisa kuyisigaba esilandelayo, noma umsebenzi wokuphetha. Wonke umuntu kufanele adlule ekunqotshweni; uma kungenjalo ngeke amazi uNkulunkulu futhi ngeke azi ukuthi kunoNkulunkulu, okusho ukuthi ngeke akwazi ukuphawula uNkulunkulu. Uma umuntu engamboni uNkulunkulu, ngeke akwazi ukupheleliswa uNkulunkulu ngenxa yokuthi akazifinyeleli izimfuneko zalokhu kupheleliswa. Uma uhluleka ukubona uNkulunkulu, ungamazi kanjani? Futhi ungamfuna kanjani? Ngeke ukwazi nokufakaza Ngaye, ingasaphathwa eyokuba nokholo olumgculisayo. Ngakho, noma ubani ofuna ukupheleliswa, isinyathelo sokuqala ukuthi adlule emsebenzini wokunqoba. Lona umbandela wokuqala. Kodwa ukunqoba noma ukuphelelisa, kuyimigomo yomuntu osebenzayo futhi kuyamshintsha, futhi ngakunye kubalulekile ekuqondiseni komuntu. Lezi zinyathelo ezimbili ziyadingeka ekuguquleni umuntu abe ophelele; asikho isinyathelo okufanele seqiwe. Kuyiqiniso ukuthi “ukunqotshwa” akuzwakali kahle, kodwa empeleni inqubo yokunqoba umuntu iyinqubo yokumguqula. Ngemva kokunqotshwa, ungase ungakwazi ukuqeda ngokuphelele ngesimo sakho esikhohlakele, kodwa uyosazi. Ngomsebenzi wokunqoba niyobazi ubuntu benu obuphansi kanye nokuthi anilaleli ngezinga elingakanani. Nakuba ningeke nikwazi ukukulahla noma nikushintshe ngesikhashana somsebenzi wokunqoba, niyokwazi ngakho. Lokhu kubeka isisekelo sokupheleliswa kwenu. Ngakho ukunqoba nokuphelelisa kokubili kwenziwa umuntu oguqukayo, kokubili inhloso yakho ukuqeda ngesimo sakhe esikhohlakele sobusathane ukuze azinikele ngokugcwele kuNkulunkulu. Kumane kuwukuthi ukunqotshwa kuyisinyathelo sokuqala ekushintsheni isimo somuntu nasekutheni umuntu azinikele ngokugcwele kuNkulunkulu, okuyisigaba esiphansi kunesokupheleliswa. Isimo sokuphila somuntu onqotshiwe sishintsha kancane kunesomuntu ophelelisiwe. Ukunqotshwa nokupheleliswa kuyehluka ngezinga elithile kumuntu ngamunye ngenxa yokuthi kuyizigaba ezingafani zomsebenzi nangenxa yamazinga angafani abantu, ukunqoba kubenza babe sezingeni eliphansi kuyilapho ukupheleliswa kubenza baphakame. Abaphelelisiwe abantu abalungile, abantu abangcwelisiwe futhi bahlanzwa; bawumphumela womsebenzi wokuqondiswa komuntu, noma isiphetho. Nakuba bengebona abangasoleki, bangabantu abafuna ukuphila okunomgomo. Kodwa kuthiwani ngokunqotshwa? Bagcina ngokusho ukuthi uNkulunkulu ukhona; bayabona ukuthi uNkulunkulu uzenze umuntu, ukuthi iZwi livela lisenyameni, nokuthi uNkulunkulu wehlele emhlabeni ukuze enze umsebenzi wokwahlulela nokusola. Bayabona nokuthi ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu nokuyala Kwakhe kanye nokucwenga konke kuyamzuzisa umuntu. Okusho ukuthi, sebeqala ukufana nabantu, bayakuqonda ngezinga elithile ukuphila kodwa inkungu isagcwele amehlo. Ngamanye amazwi, bamane nje baqala inqubo yabantu. Lena imiphumela yokunqotshwa. Lapho abantu bethatha isinyathelo sokupheleliswa, isimo sabo esidala singashintshwa. Ngaphezu kwalokho, ukuphila kwabo kuyakhula futhi kancane kancane bangena bajule eqinisweni. Abakwazi ukuzonda izwe noma bazonde bonke abangalifuni iqiniso. Bazizonda bona ikakhulu, kodwa okukhulu nakakhulu, ukuthi bazazi ngokucacile. Bazimisele ukuphila ngeqiniso futhi bakwenza umgomo wabo ukufuna iqiniso. Abazimisele ukuphila ngemicabango yezingqondo zabo, futhi bayakuzonda ukuzibona komuntu elungile, nokuzidla kwakhe. Bakhuluma into ehluzekile ngokulunga, banokuqonda, banokuhlakanipha, futhi baqotho ekulaleleni uNkulunkulu. Lapho bedlula ezikhathini zokujeziswa nokwahlulelwa, abagcini nje ngokubonisa ubuthaka, kodwa bayazazisa. Abakwazi kwenza lutho ngaphandle kokusolwa nesahlulelo sikaNkulunkulu; bangathola isivikelo Sakhe kukho. Abafuni ukholo lokuthula nenjabulo, futhi abasifuni isinkwa esizovala iphanga labo. Abayilandeli futhi injabulo yenyama. Lokhu yinto abaphelelisiwe abanayo.